Nezvedu - Handan Chuan Ding Electric Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Handan Chuanding Electric Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. yakavambwa muna 2016, ibhizimusi repamusoro-soro rinoita basa rekugadzira nekutengesa midziyo yemagetsi emagetsi, mafasteners, maturusi ehardware, rigging, maindasitiri uye zvicherwa zvemigodhi, njanji zvishongedzo, traffic yemumugwagwa. zvivako zvekushandisa, simba rekufambisa uye mutsara wekushandura iron tower uye iron accessories. Kambani iyi inobata nzvimbo inopfuura 11000 square metres, nzvimbo yekuvaka inodarika 8500 square metres, guta rakanyoreswa remamiriyoni makumi matatu nemazana matanhatu emakumi matanhatu emakumi manomwe emakumi manomwe emidziyo yakakosha uye midziyo yekuwedzera yepasirese advanced level, ine vashandi makumi mashanu, kusanganisira 15 nyanzvi uye unyanzvi vashandi, 4 mainjiniya uye 2 vakuru mainjiniya.
Zvinoenderana nezvinodiwa neiyo nyowani bhizinesi manejimendi system, kambani inoshandisa iyo inoshanda system yesangano chimiro, ine makamuri maviri madhipatimendi manomwe, anoti, general maneja hofisi, marabhoritari, mari, kugovera, tekinoroji, kuongororwa kwemhando, kugadzira, kuchengetedza uye zvekufambisa, mushure. -Sales service department, akasiyana manejimendi masisitimu, mitemo nemirau, iyo manejimendi pfungwa yepamberi, yakasarudzika.
Kubva pakuvambwa kwayo, kambani inogara ichiomerera kune "kubatana, pragmatic, kupayona, innovation" mweya webhizinesi, "kupona kwemhando, kusimudzira kwakasiyana, manejimendi kubatsirwa, kugutsikana kwevatengi" chinangwa chekusimudzira bhizinesi, teerera kukusimudzira nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva, mari yegore negore isingasviki 300000 yuan pagore, kushingaira kusuma tekinoroji nyowani nemidziyo mitsva, inogara ichishandura zvigadzirwa, kugadzira zvigadzirwa zvitsva, nesainzi yepamusoro uye tekinoroji kugadzira zvigadzirwa zvekirasi yekutanga. Muna Gumiguru 2017, kambani yakapasa nyika ISO9001 quality management system certification; muna Kurume 2018, kambani yakapasa ISO14001 Environmental Management System certification uye OHSAS18001 Occupational Health and Safety System certification. Musi waGunyana 27,2020 kuhwina ramangwana nehunyanzvi uye kubata vatengi vane mhando, zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa zvakanaka mumatunhu mazhinji nemaguta.Kambani yedu yakahwina bhizinesi repamusoro-soro renyika musi waGunyana 27, 2020.
Iyo kambani ine midziyo yekuyedza yakakwana, zvigadzirwa zvakasiyana zvinogara zvichiitisa bvunzo dzakasiyana siyana kuti ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zvefekitori zvinokodzera. Iyo kambani inoramba ichiomerera kune sevhisi tenet ye "mhando yekutanga, mushandisi wekutanga uye mukurumbira kutanga", uye inosangana nezvinodiwa nevatengi vekumba nevekunze vane yekutanga-kirasi zvigadzirwa uye masevhisi, uye inokunda kuvimba kwevatengi. Iyo kambani ine tekinoroji yekugadzira zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvese zvinotora tekinoroji yekugadzira yemukati neyekunze kuti ive nechokwadi chakagadzikana uye chakavimbika chigadzirwa chemhando.
Kunamatira kuhuzivi hwebhizinesi hwekuhwina-kuhwina kubatirana pamwe nekusimudzira kwakafanana, tinogamuchira nemoyo wese shamwari nevatengi vanobva kumativi ese ehupenyu kushanyira kutungamira uye kutaurirana bhizinesi. Tichakugamuchira nekutanga-kirasi sevhisi.